Fanefitry ny valanaretina :: Nahalany fatram-baksiny dimy arivo sy telo alina i Madagasikara • AoRaha
Fanefitry ny valanaretina Nahalany fatram-baksiny dimy arivo sy telo alina i Madagasikara
Vao fatram-baksiny « Covishield » fanefitry ny valanaretina Covid-19 miisa dimy arivo sy telo alina tamin’ireo dimy alina sy roa hetsy tonga teto amintsika no lany manarena ny Nosy, hatramin’ny afak’omaly. Milaza ho mahatsikaritra ny fiakaran’ny isan’ny olona liana amin’ny fanaovam-baksiny kosa anefa ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka nanomboka tamin’ny fanomezan-dalana ny fahafahan’ireo mihoatra ny 18 taona misitraka an’io tsindrona « Covishield » io.
“Anisan’ny entanina manokana ireo mpisehatra ara-tsosialy manakaiky ny vahoaka, toy ny mpiasan’ny fokontany, ny eny amin’ny biraom-panjakana, ny mpamonjy voina. Tsy lavina mihitsy kosa ny olon-tsotra maniry ny hatao vaksiny”, hoy ny Dr Rakotonavalona Rivomalala, talen’ny Foibem-pitantanana momba ny Fandaharana asa malalaka amin’ny fanaovam-baksiny (DPEV).
Nampitomboina, etsy an-kilany, ny toerana fanaovam-bakisiny noho ny fahamaroan’ny fangatahana voaray. Napetraka omaly, ohatra, ny ivon-toerana etsy amin’ny kianjan’ny Malacam Antanimena. Hisy toerana roa hafa hanampy ny eto Antananarivo.
Tahotra sy ahiahy
Na dia eo aza ireo rehetra ireo, dia misy hatrany ireo misalasala sy malaina amin’ny fanaovana ny vaksiny fanefitry ny Covid-19. Ao ireo nisoratra anarana tany aloha no tsy tonga, toy ny tranga eny amin’ny Andia Malagasy miady amin’ny diabeta (Amadia) sy eny amin’ny hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona.
Noho ny tahotra amin’ny mety ho fiantraikany sy ny voka-dratsin’io vaksiny io amin’ny fahasalamana na ny toe-batana any aoriana any, amin’ny ankapobeny, no antony mamparisarisa ny olona. Eo ihany koa ny tsy fahampian’ny fanentanana sy ny siosion-dresaka eny amin’ ny fiarahamonina. Betsaka ireo miantso ny laharana maitso (034 19 564 23 sy 080423) manontany tsara ny momba ny vaksiny. Misy amin’izy ireo no manontany mafy an’io mety ho vokadratsin’ny vaksiny io.
Tsiahivina fa tamin’ny alatsinainy 10 mey no nanombohan’ny fanaovam-baksiny fisorohana ny Covid-19 teto Madagasikara. Faritra maro no efa nahazo ny anjarany sy nitsinjara azy. Andrasana ny tsindrona fanindroany, izay tokony haverina raha afaka telo volana.
Fampianarana ambony :: Manahirana ny oniversite ny fepetra famoriana olona
Disadisana finoana :: Saro-bahana ny olan’ny Jesosy Mamonjy Ankorondrano